イジビドブログgbara onwegị、ga ga-ebuụzọchọọngalaba aha naakaụntụnnabata web.
Jiri Bekeedịmfe ma deeahịrịokwudịmkpụmkpụ。 Mee kaamụrụihe gaga-agụmakaụmụakwụkwọklas nkeasatọ.
ナーン・ドベ・ンジコ・エベ・ダバラ・アダバ。 Achọgharịlaspam、n’agbanyeghịịdịọnwaleọnwere ikeịbụ; ọga-agbakwasịgị.
Everchọtụlaịmaliteblọgụnkegị？ Maọbụ、すでにnweelaブログịna-ejighi n’aka etuịga-esi ruoọkwankeọzọ? Ọbụrụnaazịzagịbụ "ええ" mgbeahụpeeji abụebeịkwesịrịịdị. Contents0.0.1 N’ime ntuziakaịdeblọgụ、ịga-amụta：0.0.2 ジニ・クパタラ・ヌドゥ・ア？これからgbasara onwe